TRAINING – TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center
“ TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center မှ ရုံးချိန်လွှတ် “ VOIP Engineer ” လက်တွေ့ အထူးသင်တန်း (B-2) “
Posted on 05/10/2017 by traadmin — 1,319 Comments ↓
“ TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center မှ ရုံးချိန်လွှတ် “ VOIP Engineer ” လက်တွေ့ အထူးသင်တန်း (B-2) “ သင်တန်းချိန် – 7.10.2017 (10:00 AM To 12:00 PM/ Sat , Sun Only) သင်တန်းကြေး Continue Reading →
Posted in TRAINING	| 1,319 Comments ↓
Posted on 21/09/2017 by traadmin — 1,731 Comments ↓
TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသော လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်းများ ………. OUR TRAINING List of some training included in TRA – Myanmar. Hardware Engineering Course (CompTIA A+) Computer အခြေခံ တက်ရောက်ပြီးသူများနှင့် နည်းပညာ Continue Reading →
Posted in TRAINING	| 1,731 Comments ↓
HARDWARE ENGINEERING COURSE (COMPTIA A+) သင်တန်း 9.9.2017 ရက်နေ့ ဖွင့်မည်
Posted on 09/09/2017 by traadmin — 1,209 Comments ↓
TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center မှ August လကုန် ရုံးချိန်လွတ် “စနေ၊ တနင်္ဂနွေ” Hardware Engineering Course (A+) ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ ****************************************** သင်တန်းချိန် – 9.9.2017 (4:00 PM To 6:00 PM) သင်တန်းကြေး – 200,000 Kyats Continue Reading →
Posted in TRAINING	| 1,209 Comments ↓
Facebook တွင် အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင် စေရန် LIKE ပေးထားပါ
Network Engineering Course ရုံးချိန်လွတ် တန်းခွဲသစ် ဖွင့်လှစ်ပါမည်
” Rack Type အမျိုးအစား size အစုံ နှင့် Network Cable များကို TRA-Myanmar IT Solutions & Training မှာ ဆက်သွယ်လို့ ဝယ်ယူနိင်ပါပြီ
“ Password ကြောင်း သိ့ကောင်းစရာ ၊ မိမိရဲ့ Password တွေကို ဘယ်လို ပေးကြမလဲ ? ”
Copyright © 2018 TRA-Myanmar IT Solutions & Training Center All Rights Reserved.